Gurukota rezveKutongwa kweMatunhu, VaJuly Moyo Vopika Kuti Chibvumirano chePomona Hachisi Kuzomiswa
Chikumi 03, 2022
Gurukota rezvekutongwa kwematunhu, VaJuly Moyo.
Gurukota rezvekutongwa kwematunhu, VaJuly Moyo, vanoti chibvumirano chePomona pakati pekanzuru yeHarare nekambani yeGeorgenix BV chichaenderera mberi zvisineyi nekuti kanzuru yeHarare nemusi weChina yakambosendeka chibvumirano ichi parutivi ikaumba komiti yekuchiongorora.
Mumashoko avo kuvatori venhau, VaMoyo vati chibvumirano ichi, chePomona Waste to Energy Joint Venture Agreement, pakati pekanzuru yeHarare neGeorgenix Bv hachisi kuzodzokera kumashure kunze kwekunge chamiswa nematare edzimhosva.
Vatiwo zvinoshamisa kuti kanzuru yeHarare yakagara pasi nezuro kuzeya chibvumirano ichi kunyange hazvo nyaya iyi yave mumatare edzimhosva.
VaMoyo vatiwo chibvumirano ichi chakaitwa pachitevedzwa mitemo yese kusanganisira yeZimbabwe Investment Development Agency, chikatambirwawo nedare remakurukota.
VaMoyo vati zviri kuitwa nekanzuru yeHarare zvinokanganisa zvido zvemakambani ekunze anoda kusima mari dzawo muZimbabwe.
Asi vagari vemuHarare vari kunyunyuta kuti chibvumirano ichi chakaitwa zvisina kujeka ndosaka vakachema chema kukanzuru yavo vachiti kanzuru icharasikirwa nemari yakawanda nekuda kwechibvumirano ichi.
Chibvumirano ichi chakasainwa nevaive vakabata matomu ameya veHarare, VaStewart Mtizwa veMDC-T apo meya VaJacob Mafume veCitizens Coalition for Change vainge vakambomiswa basa.
VaMafume vaudza Studio7 kuti vanomira nezvisungo zvekanzuru yavo uye vanotarisira kuti vashandi vekanzuru vachetevedzera zvisungo izvi.
Vati kubvira pakasainwa chibvumirano ichi Georgenix yave kutoda mari inodarika mazana manomwe ezviuru zvemadhora kubva kukanzuru yavo uye havasi kuzobhadhara mari iyi.
Mutauriri weCCC Advocate Fadzayi Mahere vaudza Studio7 kuti chibvumirano ichi chakaisainwa zvisiri pamutemo sezvo chisina kusainwa naVaMafume. Vati izvi zvakaburitswa pachena nedare repamusoro svondo rino iro rakapa mutongo wekuti kumiswa basa kwaVaMafume hakusiri pamutemo.
Asi mushandi mukuru anoona nezvekuburitswa kwemashoko muZanu PF, VaTafadzwa Mugwadi vanoti havaoni chakakanganiswa muchibvumirano chekanzuru nekambani ye Georgenix, chakaitwa zviri pamutemo asi chete kuti VaMafume vari kurwadziwa kuti havasi ivo vakachisaina.
Mukuru werimwe sangano rinomirira vagari reHarare Residents Trust, VaPrecious Shumba, vatenda makanzura eHarare nedanho raakatora nezuro vachiti rinoenderana nezvido zvavo.
Vati zviri kuitwa naVaMoyo kupikisana nevagari vemuHarare.
Vanoona nekufambiswa kwezvirongwa mune rimwe sangano revagari reCombined Harare Residents Association, VaReuben Akili vaudzawo Studio 7 kuti vagari vanofanira kutora matanho ese avanokwanisa mukuona kuti chibvumirano ichi chamiswa zvachose zvisineyi nezviri kutaurwa naVaMoyo.
Mukuru wesangano reCommunity Water Alliance, VaHardlife Mudzingwa vatiwo VaMafume nekanzuru yavo havafaniri kuteerera VaMoyo uye vanofanira kuenderera mberi nezvisungo zvavo.
Pasi pechibvumirano chePomona, kanzuru yeHarare ichabhadhara kambani yeGeorgenix zviuru mamiriyoni mazana matatu nemakumi mana mukati memakore makumi matatu anotevera uye kambani iyi ichange ichigaya magetsi nekupatsanura marara pamwe nekugadzira nzvimbo yekutandarira nemabhizimisi kunzvimbo yekanzuru yePomona.
Chibvumirano ichi chiri kupikiswawo kumatare edzimhosva nemumiriri weHarare North muNational Assembly VaRusty Makharm veCCC.